च्याङ्ग्रा महँगियो त के भो ? लोकल कुखुरा छन् ! - Digital Khabar
२४ असाेज, बागलुङ । हो, दसैँमा च्याङ्ग्राको मासु खान सबैको गच्छेले भ्याउँदैन । यसपालि त झन् च्याङ्ग्रा धेरैका लागि रहरमा मात्र सीमित हुनेवाला छ । बजारमा रोज्जा च्याङ्ग्रालाई रु ४० हजार पर्छ । पसलबाट मासु किनेर खाँदा प्रतिकिलो रु दुई हजार ।